खुशीको खबर, आज नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप आउने, कसले लगाउलान् पहिलो खोप ? – Gazabkonews
खुशीको खबर, आज नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप आउने, कसले लगाउलान् पहिलो खोप ?
नाग नागीनले माछाको बर्षौदेखि रक्षा गर्दै आएका छन् यो पोखरीमा, कसैले माछा लैजाने खोजे नसोचेको कुरा हुन्छ, हेर्नुहोस् भिडियो
बलिउड अभिनेता सोनु सुद नेपाली भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन्, यि नेपाली बिरामीलई गर्दैछन् आँफैले उपचार, भगवान् मान्छन् सोनु सुदलाई
माग्ने बुढा आफ्नी १ सय बर्षकी हजुरआमासँग यसरी रमाए, भिडियो हेरेर नहाँँस्ने को होला ?
गरिब र दिनदुखीका भगवान् सोनु सुदको अर्को तारिफयोग्य काम
शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले दिपा कुँवरलाई म.र्नु न बाँ. च्नु बनाएको रहस्य बाहिरियो, दीपाले वि .ष समेत से वन गर्न खोजिन् तर…
मेरो अर्कै के,टा छ भन्ने, देखाउँदै पि,ल्स खाने अनि रबर को लि,अङ्ग प्र,योग गर्ने यि को हुन् ? हेर्नुहोस् खुल्यो रहस्य
यिनै हुन कोहलपुर’को दु’र्घटना’मा ज्या’न गुमाए’का २५ वर्षिय क्रिकेट खेलाडी बिरेन्द्र
ज्योतिष अभिनेता हरिहरसँग विबाह गर्दै नायिका निता ढुंगाना
ज्योतिष अभिनेता हरिहरसँग लगनगाँठो कस्दै नायिका निता ढुंगाना
पूर्व मिस नेपाल शृखला खतिवडाले अचानक देश छाड्ने निर्णय गरेपछि तनावमा प्रेमी सिसन बानिया
परपुरुष संग रं,गेहात भेटेपछि श्रीमती फरार, श्रीमानले गरे आ,त्मह त्या
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीः रक्षामन्त्री पनि आफैँ, गृहमन्त्री आफ्नै समूहका तर असुरक्षित कसरी
काठमाडौ । आजवाट नेपालमा पनि को,रोना विरुद्धको खोप आउने भएको छ । भारत सरकारले नेपाललाई यही बुधबार (आज) बाट कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि त्यो सम्भव भएको हो ।
भारतले आफ्नो देशमा उत्पादन भएको खोप नेपाल सहित भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, सेसल्स र म्यानमारलाई उपलब्ध गराउने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको हो ।
कति मात्रामा खोप उपलब्ध गराउने बारे जानकारी भने आएको छैन । भारतीय मिडियाका अनुसार भारतका अन्य केही छिमेकी देशहरुलाई पनि सम्बन्धित देशले स्वीकृति दिएपछि खोप उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
भारतले अनुदानको रुपमा उक्त खोप उपलब्ध गराउन लागेको हो । भारतले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिसकेको छ । अग्रमोर्चामा खटिने कामदार सहित जोखिममा रहेका नागरिकहरुलाई यही सातादेखि खोप लगाउन सुरु गरेको हो ।
नेपालले भने यसअघि नै ६० लाख मानिसका लागि कोभिशिल्ड खोप भारतबाट खरिद गर्ने इच्छा देखाएको थियो । भारतमा खोप लगाउन सुरु भए पनि दोस्रो स्वरुपको को,रोनाको सं,क्र,मण सुरु भएसँगै थप चु,नौती पनि थपिएको बताइन्छ ।